Mahhala Easy Online Igama Scrambler - Word Orbit
Mahhala Easy Online Igama Scrambler
Uyini kuncibilika izwi?
Kungani ukusetshenziswa izwi Scrambler?
Igama kuncibilika ukukopela
Kungani izwi lethu Scrambler engcono?
Isibonelo Uhlu kuncibilika amazwi
Izinzuzo izwi Scrambler
Ungase uzibuze ukuthi kungani ukuxazulula anagrams futhi amazwi ukuxova ngeZwi Scrambler kuyinto fun oyinhloko?
Nokho, yini enye ijabulise umuntu ngaphezu ukudlala ngamazwi, kuba umsebenzi kakhulu kumnandi ngesikhathi yethu yokuzilibazisa lapho sikhululekile futhi Ufika bored yokwenza lutho.
Kunezindlela eningi futhi yafuna izindlela imidlalo ukudlala ngamazwi, ezifana WWF (Igama nabangani), Jumble, Literati, Scrabble, njll Lezi imidlalo hhayi kuphela ukukusiza ukuba ube nesikhathi esimnandi kodwa futhi ingqondo Busters ukuthi ngcono lehlukene ekucabanga kwengcondvo netintfo jikelele engqondo impilo.
Igama Scrambler iyi-online izwi kuncibilika umdlalo esesikhundleni esonta eziningi kangaka ezithakazelisayo futhi badedelane.
Kuyinto ukwenza izwi futhi game ethokozisayo; the Scrambler emhlabeni lihlukile izwi unscrambler . Igama unscrambler isetshenziswa unscramble amagama ngenkathi Scrambler igama elisetshenziselwa belwela wonke amagama kunokwenzeka.
Ubuntu Abaningi ovelele emhlabeni wonke ziyazithanda lezi anagrams ukuxazulula futhi puzzle imidlalo.
Igama belwela noma Jumble iyona puzzle izwi ukuthi udlalwa ngu ukuxova izincwadi ukwenza anagrams, ngosizo abanye umkhondo.
Martin Naydel yethulwa umdlalo izwi kuncibilika okuyinto yaziwa nangokuthi jumbled amazwi ngo-1954 Lo mdlalo egcwele injabulo; konke okudingayo ukuze belwela izinhlamvu, okuyinto engenza mazwi abalulekile ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Njengoba udlala lo mdlalo, khumbula ukuthi score uyazicabangela njengoba umgomo oyinhloko walo mdlalo, futhi amaphuzu ngokuphelele esekelwe ubude amagama ukupela, ubunzima yencwadi oyisebenzise, ​​futhi yebo ngokushesha kangakanani ukuthola futhi ukupela la mazwi. Ubunzima ngaphezulu ubhekana, kulapho handsomely uzobe ukhishwa.
Bonke abadlali uzame ukumisa kabusha izincwadi beveza umusho okunenjongo ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ingabe namanje khumbula ukufunda amagama amasha ngesikhathi esikoleni? Nokho, lo mdlalo kungenzeka amathekhiniki oyisebenzise ukufunda amagama amasha kanye ukupela kwabo. Udinga ukuhlela ongwaqa kanye onkamisa ukwenza amazwi okunenjongo.
Ngokwesibonelo, kukhona igama elithi “FUMNIF,” futhi kudingeka uhlele izinhlamvu futhi wenze mazwi abalulekile; igama Muffin. Esinye isibonelo “SNITIS,” futhi uma unjumbles futhi uzihlele kabusha, leli gama kuvela ukuthi “QINISEKIKSA.”
Amagama ukuxova akuyona umdlalo lula; udinga umzamo ophindaphindiwe ukuze ukuhlala ngaphambi izimbangi zakho noma abangani.
Silulumagama ufeza Ukubusa ebaluleke uma kuziwa ekuxazululeni anagrams kanye puzzle. Kunezindlela elikhulu ukwandisa ulwazimagama yakho, ezifana ukudlala imidlalo inthanethi, ukuxazulula puzzle ukuthi ishicilelwe emaphephandabeni, komagazini, Sudoku, njll
Lapho uprakthiza, amathuba ngaphezulu wena ukwandisa ulwazimagama yakho, kodwa inkinga wukuthi ungakwazi ngaso sonke isikhathi ukuxazulula lezi puzzle ngokwakho.
Yize, uma une ulwazi kakhulu nolwazimagama, kodwa ukunqoba umdlalo, usadinga lokushaya kakhulu lendze ekhuphuka nge amagama kakhulu okunenjongo kulezi imidlalo.
Kuyinto lapho Scrambler izwi livela ukuthi ingakusiza kuzuzwe izikolo aphezulu kulezi imidlalo.
Ngakho noma nini lapho wehluleka ukuxazulula lezi puzzle izwi imidlalo noma stucks noma ufuna ukuthuthukisa ulwazi lwakho, uthola usizo isofthiwe noma lokusebenza, okuyinto njengoba aziwa “Igama Scrambler.”
Lokhu Scrambler ithuluzi izwi kukusiza ukuba belwela amagama. Odinga ukungena amazwi ofuna kuncibilika ku text box futhi voila. Ithuluzi izwi Scrambler izobonisa mazwi abalulekile kakhulu ngawe.
Anagram kuncibilika kuyinto ibinzana noma izwi, okudaliwe by ekwakubekwe izinhlamvu imishwana ehlukile noma amazwi. Kudaliwe for fun and kusho ukuthola incazelo imfihlo ukufunda lezi zincwadi awahlelanga.
Ngesikhathi lapho ukuxazulula wokuphicaphicana ngamagama nezinombolo kuncibilika, akudingeki abheke incazelo imfihlo njengoba enjalo. Kunalokho, kudingeka ukuba uhlolisise izinhlamvu unjumble lezincwadi ezivela iqoqo lamagama ngiyocasha kabusha amagama akhona kuzo.
Ungenza mazwi abalulekile futhi ezinde ngo unjumbling lezi zincwadi.
Ngokwesibonelo, “DGUTEB” – “. YESABELOMALI” uma unjumble, uzothola igama-incwadi eziyisithupha ngokuthi Ngokufanayo, igama wayephambanisa, “IGLGEG,” futhi unjumbled ke, uzothola “unsinsitheka.”
Into enhle ukuthi uyobe othanda ukuthi ungakwazi ukudlala umdlalo wokuphicaphicana ngamagama nezinombolo kuncibilika futhi izwi kuncibilika inthanethi.
Izinkulungwane amasayithi ayatholakala ukuthi akuvumela ukuthi udlale izwi unscrambler imidlalo nabangani mahhala.
Igama Scrambler ukukopela
Akunandaba ukuthi udlala umdlalo ongaphandle, noma ukudlala umdlalo puzzle ku-smartphone yakho, noma ukudlala izwi ukuxova umdlalo, zonke kuyindaba ukunqoba umdlalo.
Kubonakala Ukungathembeki kube kumnandi kakhulu, ikakhulukazi uma udlala nabangani bakho. Hhayi-ke, ungaba izwi Scrambler ukukopela, ngenkathi edlala nabangani bakho for fun.
Futhi, ungasebenzisa izwi unscramble ukukopela ngenkathi idlala ke ku-intanethi. Uzoba amaphuzu ngaphezulu uma usebenzisa isikhethi. Ungakwazi namanje amaphuzu eliphezulu ukukopela noma ngabe wasebenzisa wonke wildcards yakho.
Uma ufuna ukuthola amaphuzu angaphezu kuka izimbangi zakho, kumelwe uthathe ngosizo isichazamazwi izwi kuncibilika. Uzothola kokubili Scrambler izwi nezwi unscrambler isichazamazwi kwi website yethu.
I-inthanethi igcwele amanzi nge izingosi ezinjalo lapho ubeka izwi letihlangahlangene bese amazwi unscrambled noma unjumbled, kodwa uma udinga okungcono izwi Scrambler, khona-ke kumelwe uzame inthanethi yethu izwi Scrambler ithuluzi.
Ungathola usizo online ngenkathi edlala le midlalo. Futhi, ungavakashela izwi inthanethi dictionary scrabble ukuthi kukusiza ukuba uthuthukise ukusebenza kwakho jikelele.
esheshayo futhi eziphambili kakhulu izwi Scrambler yethu uyokusiza ukuba izincwadi ezithile kanye amazwi ezinhlanganweni ezithile; konke okudingayo ukuze ufake amazwi osithandayo noma incwadi ebhokisini umbhalo.
Uma udlala for fun, ngokuthuthukisa ulwazimagama yakho noma okwandisa ulwazi lwakho, ithuluzi lethu elithi Scrambler ekulungele futhi kuyokusiza ukuba amazwi ezinhlanganweni ezithile kalula.
Uhlu kuncibilika amazwi
Sihlanganyela uhlu amazwi ngiyocasha, amazwi jumbled. Thina unjumble lamagama ngosizo inthanethi yethu izwi Scrambler ithuluzi futhi uthole zonke lezi imiphumela. Ungase futhi uthole amagama obuphelele sihluke amazwi ngiyocasha. Odinga ukubeka izinhlamvu ezimbalwa ngiyocasha ku text box futhi ake izwi lethu unscrambler ithuluzi do ukuphumula ngawe.
I kungenzeka amazwi unscrambled kukhona;
incwadi nanhlanu izwi: IZITHELO
Four incwadi ngamazwi: FRIT, Rift, Turf,
amazwi incwadi ezintathu: noboya, FIT, FIR nokunye
incwadi nanhlanu izwi: TITLE
amazwi amane incwadi: Tshela, LILT, kuze, ITLL
amazwi incwadi ezintathu: Ill, ake, amanga nokunye
amazwi incwadi nanhlanu: bakhohlise, THECA, TACHE
Four incwadi ngamazwi: XOXA, NGASINYE, etch, TECH
amazwi incwadi ezintathu: CAT, ACE, UMTHETHO, hat, THE, IDLA nokunye
Uhlu amagama amaningi adumile ngiyocasha
Nakuba zikhona eningi amagama adumile ngiyocasha emhlabeni wonke, kuzo zonke izizwe uhlu mazwi adumile ngiyocasha, kodwa kukhona amazwi ozithandayo ngiyocasha ukuthi zingaxazululwa ngosizo izwi Scrambler nazo sonke isikhathi.
Our ithuluzi izwi Scrambler kuyokusiza ukuba ufunde indlela belwela kulolu hlu futhi ahlale phezu izimbangi zakho.
Amagama Edume kakhulu ngiyocasha
Uhlupho olukhulu kuhulumeni – (Kakhulu)
RESSURECTION – (ukuhlangana, tiercerons, ceintures, coinsure, njll)
SUPEREGO – (isiPutukezi)
CLAMBERS – (belwela)
CAMERIA – (Melika),
SPURRIES – (Isimanga futhi Up risers)
WOBEL – (wamathumbu, Elbow, futhi Ngezansi)
Zikhona izinzuzo eziningi kangaka izwi Scrambler, omunye leyo ebaluleke kakhulu kuba ukukwazisa zonke amazwi ezinhlanganweni ezithile kungenzeka ngaphambi izimbangi zakho.
Silulumagama eqinile kuyisihluthulelo impumelelo ngokuwina lo mdlalo, kulapho obaziyo ukuze ufunde mayelana amazwi, amathuba uyokubona ukunqoba umdlalo njalo.
I Scrambler izwi yilona thuluzi engcono esikuvumela ufunde amagama amasha, ngcono ulwazimagama yakho, futhi kukwenze ukwazi ukubona belwela amagama ngokushesha okukhulu izimbangi zakho.
ithuluzi Igama Scrambler akuyona kuphela isikhathi kahle, kodwa futhi cishe bagcina ekwandiseni inqolobane yakho yamagama futhi ukufunda amagama amasha nsuku zonke.
Igama Scrambler kubhekwa omunye ithonywe kakhulu futhi okuthakazelisayo imidlalo yangendlini ukuthi ungadlala ngesikhathi sakho khulula. Unscrambling , Jumbling, nokudlala ngamazwi yilona fun oyinhloko.
It is a game elikhiqizayo kakhulu izingane eziwasiza ukuba ufunde amagama amasha futhi ukwandisa ulwazimagama lwabo. Ungadlala kunini online nabangani bakho, umndeni.